Ngaba iMitshato ihlala isontyenzana?
Kukho umbono oqhelekileyo wokuthi umtshato uyisiseko senkolo-esekelwe kwimilinganiselo yonqulo kwaye ikhona ukukhonza iiphelo zonqulo. Ngaloo ndlela, ukuba umntu akayikho inkolo , ngoko kubonakala kungokwemvelo ukuba loo mntu angayi kuphuma emtshatweni - kwaye oko kuya kubandakanya abaninzi abangakholelwa kuThixo.
Ingxaki kukuba, le ngcamango yomtshato ingenakulungile. Kuyinyani ukuba inkolo ininzi enokuyenza ngomtshato njengoko iqhelekileyo kumazwe amaninzi, kuquka i-United States, kodwa oko akuthethi ukuba olu lamano luyimfuneko okanye luyimfuneko .
Isibalulekileyo kulo mbuzo kukuqonda ukuba indlela eyenziwa ngokuqhelekileyo ayikho indlela ekufuneka yenziwe ngayo okanye indlela omele uyenze ngayo.
Imikhosi yomtshato inemibandela emibini ehambelana nayo: uluntu kunye nolwangasese. Uluntu lunokuthi lithathwe njengendawo yomthetho apho umtshato utyunjwe nguRhulumente kwaye apho izibini ezitshatileyo zithola inzuzo ethile yezoqoqosho nezentlalo. Umbuso wabucala uquka ukudala inxalenye yentsapho entsha: xa abantu babini bashada, nokuba umtshato usemthethweni okanye uqobo, kubonisa uthando, inkxaso kunye nokuzibophezela phakathi kwabantu abathandana nabo.
Ukwahlukana phakathi koLuntu kunye noBucala
Bobabini imibutho yoluntu nemibandela yomtshato ibaluleke kakhulu; nangona kunjalo, akukho nto ifuna isiseko senkolo okanye ukubandakanyeka kwenkolo. Nangona kukho abantu abaninzi ebantwini abaya kuzama ukwenza ngokungathi inkolo - kwaye, ngokukodwa, inkolo yabo- yinto ebalulekileyo kwiindawo zombutho zentlalo kunye noluntu, akufanele ukholelwe.
Ngommandla wabucala, abanye bayakuxela ukuba ukuthembela kuThixo kunye nokunamathela kwimfundiso eyahlukeneyo yonqulo yizona zithako eziphambili zokudala umtshato ophumeleleyo novuyo. Mhlawumbi ngamalungu alezo zonqulo, oku kuyinyaniso-ukuba umntu ungumkholi ozinikeleyo, ngoko kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba banokuthatha inxaxheba kwezobudlelwane obusondeleyo kunye obalulekileyo njengomtshato ngaphandle kweenkolelo zonqulo eziza kudlala.
Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba abantu ababini abakwazi ukwakha ubudlelwane obuqinileyo, obuhlala ixesha elide, kunye nolonwabo ngaphandle kwenkolo okanye i-theism edlala nayiphi na indima indima. Ayikho inkolo okanye inism ayimfuneko ukuze ube nolwalamano nomnye umntu. Akukho mfuneko ukuze uthande omnye umntu. Akukho mfuneko yokuzinikela kunye nokunyaniseka nomnye umntu. Akukho mfuneko yokudala isiseko sezoqoqosho kwezobuhlobo. Konke kuzo zonke, unqulo okanye u-theism ayongeze nayiphi na into emtshatweni ngaphandle kokuba abo babandakanyekayo sele bencike kubo ngendlela ethile.
Ngombuso karhulumente, abanye bayakuphikisa ukuba imigaqo ethile yenkolo yomtshato kwaye ibe yinto efunekayo rhoqo kwi-social order order; ngenxa yoko, kuphela loo migaqo yomtshato ifaneleke ngokusemthethweni ngurhulumente. Ngenxa yoko, akubona bonke ubudlelwane obunamalungelo abafumana umvuzo wezoqoqosho kunye nentlalo yomtshato.
Kutheni Ufumana Umtshato?
Inyaniso yalo mbandela, nangona kunjalo, ingcamango yeNtshontsho yomtshato njengowokuphela kwendoda enye kunye neyodwa ibhinqa yinkcubeko kunye neemeko zembali - akukho nto imfuneko okanye ibonakala ngayo. Ezinye iintlobo zomtshato zingathi zizinzile, nje ngokuba zivelisa, kwaye zinjengothando.
Akukho sizathu sokubakhupha kwiqela elithi "umtshato" ngaphandle, mhlawumbi, njengendlela yokukhuthaza ukuxhaswa kwezenkolo okanye inkcubeko.
Akukho nanye kule nto ithetha ukuba, ukuba abantu ababini ebudlelwaneni obuzinikeleyo nothando mabafanele batshata. Kukho iingenelo ezibalulekileyo zokuba nesitifiketi somtshato kwaye kukho kubonakala kungesizathu sokuba ungayenza , ukuba unako, kodwa ukuba uyaqhubeka nokuchasene nefilosofi okanye yezopolitiko ngoko kulungile. Ukungatshatanga akusisona isithintelo sokuba nobudlelwane obunzulu nolunentsingiselo kunokuba ungenayo inkolo.
Ukubaluleka koTitshala oPheleleyo kuMnxibelelwano woTitshala
Ziziphi i-Soccer Players ezifanele zidle